Usayizi waphansi: 1137 Sq feet
Ifulethi elakhiwe kahle i-2 bhk multistorey liyatholakala endaweni ephambili eVesu. Inendawo eyakhelwe ngaphakathi eyi-1137 sqft futhi inentengo kuma-Rs. 42.00 amalitha. Isikhathi ozosichitha lapha sizoba yisikhathi esikhulu kakhulu sempilo yakho esizokusiza futhi ukuba ukhululeke, uphumule uvuse umuzwa omkhulu wenjabulo. Umphakathi uxhunywe kahle izindlela ezahlukahlukene zokuhamba. Uma unentshisekelo, sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.